थाइराइड के हो ? यस्ता छन् लक्षण र यसबाट बच्ने उपाय « Janata Samachar
थाइराइड के हो ? यस्ता छन् लक्षण र यसबाट बच्ने उपाय
काठमाडौं । शरीरको मेटाबोलिजम अर्थात् खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न थाइराइड हर्मोन आवश्यक पर्छ। थाइराइड रोग होइन। यो हाम्रो घाँटीमा हुने ग्रन्थी हो। यसले टी ३ र टी ४ नामक हर्मोन बनाउँछ। यो हर्मोनले शरीरलाई चाहिने तत्व विभिन्न अंग, कोशिकामा पु¥याउन सहयोग गर्छ र शरीरले तागत प्राप्त गर्छ। मेटाबोलिजम फोक्सो, हड्डी, छाला, मुटुलगायत शरीरका सबै अंगलाई चाहिने कुरा हो।
थाइराइडबाट बच्ने उपाय
थाइराइड समस्या जटिल र डराउनु पर्ने खालको होइन। यसले आयु घटाउँछ भन्ने भ्रम छ। त्यो गलत हो। थाइराइड भएपछि बच्चा हुँदैन भन्ने सोचाई पनि गलत हो। उपचारपछि सन्तान हुन्छ। थाइराइड भएकामा क्यान्सरको जोखिम हुने भएपनि अधिकांश अवस्थामा क्यान्सर नै हुन्छ भन्ने हुँदैंन। थाइराइड ग्रन्थी एक सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो छ भने इन्जेक्सनको माध्यमबाट पानी वा मासु झिकेर जाँच गरिन्छ। यदि खराबी देखियो भने शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। यदि फोका ४ सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो छ र सास जाने नली थिचेको छ भने शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिइन्छ। बिभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
संक्रमण पोजेटिभ भएको खबर पाएको आज पाँच दिन हुँदा पनि ममा केही लक्षण देखिएकाे छैन
नेता थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज
थापाको पछिल्लो पटकको स्वाब परीक्षणको नतिजा भने आएको छैन ।
काेराेना संक्रमणबाट पाँच जनाकाे मृत्यु
पछिल्लाे २४ घण्टामा नेपालमा थप पाँच जना काेराेना संक्रमितकाे ज्यान गएकाे छ ।